PSJTV | पाँचवर्ष भित्र चीनको जनसङ्ख्या १ अर्ब ४२ करोड !
पाँचवर्ष भित्र चीनको जनसङ्ख्या १ अर्ब ४२ करोड !
शनिबार, २२ फागुन २०७२ पिएसजे न्युज
चीनको जनसङ्ख्या आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा १ अर्ब ४२ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरुले शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा चीनको जनसङ्ख्या आगामी सन् २०२० को अनत्यसम्ममा १ अर्ब ४२ करोड पुग्ने देखिएको हो ।
शनिबार चिनियाँ अधिकारीहरुले विकासका लागि अन्य कार्यक्रमहरुका साथै आगामी पाँच वर्षका लागि चीनको जनसङ्ख्या बृद्धिको पनि आंकलन गरेका थिए ।
उक्त पाँचवर्षे योजनामा गरिएको अनुमानअनुसार आगामी पाँच वार्षमा यहाँको जनसङ्ख्या कम्तीमा पनि साढे चार करोड थपिने छ ।
सोही आधारमा आगामी पाँचवर्षमा चीनको जनसङ्ख्या त्यतिधेरै पुग्ने बताइएको हो । चीन हाल पनि विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको देश हो । सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा चीनको जनसङ्ख्या करिब एक अर्ब ३८ करोड रहेको बताइएको थियो ।
चीनको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०१५ को अन्त्यसम्मको भनी शनिबार सार्वजनिक गरेको जनसङ्ख्या प्रतिवेदनमा सो सङ्ख्या देखाइएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा नै चीन सरकारले आगामी दिनमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्ने जनाइएको छ । सरकारले आधारभूत सेवाका रुपमा यो नीति पनि अख्तियार गर्ने भएको हो ।
चीन सरकारले सन् २०१६ को सुरुवातदेखि नै चीनमा दुई सन्तान नीतिलाई अनुमति दिएको थियो । यसअघि सन् १९७० को दशकदेखि चीन सरकारले त्यहाँ एक सन्तान मात्र जन्माउन पाउने अधिकार चिनियाँ नागरिकलाई दिएको थियो ।
चीन सरकारले यसअघि अपनाएको एक सन्तान नीतिका कारण पनि चीनमा लैंगिक असमानताको अवस्था देखिएको थियो । दुई मात्र सन्तान जन्माउने अनुमति पाउँदा कतिपय चिनियाँ नागरिकले छोराको मात्र चाहना राख्ने कारणले गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको जनसङ्याविद्हरुले जनाएका थिए ।
चितवन: चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । क्रिकेट मैदान सम्याउने र नाली निर्माणको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । रङ्गशालाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नका ...